मेलम्ची बाढीमा फसेका मानिसहरुलाई सेनाको हेलिकप्टरले यसरी उद्दार गर्दै ! हे’र्नुहोस् (भिडियो सहित) – SUDUR MEDIA
June 16, 2021 AdminLeaveaComment on मेलम्ची बाढीमा फसेका मानिसहरुलाई सेनाको हेलिकप्टरले यसरी उद्दार गर्दै ! हे’र्नुहोस् (भिडियो सहित)
काठमाडौं, २ असार । मंगलबार साँझ आएको भिषण बाढी र पहिरोमा परि सिन्धुपाल्चोकमा कम्तिमा सात जनाको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेहरूमा हेलम्बु-२ का ३१ वर्षीय माधव भण्डारी , ४२ वर्षका गणेश ज्योति, हेलम्बु-३ का १३ वर्षीया टीकामाया खड्का, हेलम्बु-७ का ज्ञानेन्द्र कक्षपति, चौतारा साँचोकगढी नगरपालिकाका २३ वर्षीय समुन्द्र नेपाल र हेलम्बु-६ का च्याङ्बा तामाङ छन् ।
मृतकहरू सबै मेलम्ची ट्राउट फर्ममा कार्यरत थिए । मेलम्ची र हेलम्बुमा आएको बाढी–पहिरोले ठुलो क्षति गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी अरुण कुमार पोखरेलले जानकारी दिए । मेलम्ची खोला उर्लिंदा मेलम्ची बजारमा डुबेको छ । जिल्ला प्रहरीका अनुसार अहिलेसम्म दुई पक्की मोटरबेलसहित आधा दर्जन झोलुंगे पुल र दर्जनौ घर बगेको विवरण आएको छ ।
सडकहरु पनि भत्किएकाले यातायात सम्पर्क विच्छेद भएको छ । अहिले सेनाको हेलिकप्टर मार्फत त्यहाँ उद्दारको कोशिस भैरहेको छ । खोलामा अझै पनि पानीको बहाव नघटेकोले सतर्कता अपनाउनु पर्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारी पोखरेलले बताए । थप हेर्नुहोस् भिडियोमाः